“Waxaanu Ummadda U Caddaynaynaa In Shirkii Kulmiye Afduuban Yahay, Guddidii Farsamana U Shaqaynayso Musharrax Muuse Biixi” | FooreNews
Home wararka “Waxaanu Ummadda U Caddaynaynaa In Shirkii Kulmiye Afduuban Yahay, Guddidii Farsamana U Shaqaynayso Musharrax Muuse Biixi”
“Waxaanu Ummadda U Caddaynaynaa In Shirkii Kulmiye Afduuban Yahay, Guddidii Farsamana U Shaqaynayso Musharrax Muuse Biixi”
Xubnihii Hogaanka KULMIYE Ee Madaxweynuhu Ku Xoojiyey Qabanqaabada Shirka Oo Shaaciyey In Gabi Ahaanba Hawshii Shirka Laga Horjoogsaday Oo Garabkii Kale Sii Wato
Hargeysa (Foore)- Guddoomiye ku xigeenada labaad iyo saddexaad ee xisbiga KULMIYE Xildhibaan Maxamed X. Yuusuf Axmed (Waabeeyo) iyo Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle, islamarkaana ka mid ah Guddidii Madaxweyne Siilaanyo dhawaan ku kordhiyey Masuuliyiinta qabanqaabada Hawsha KULMIYE kana soo jeeda Garabka Midig ee isbahaysiga KULMIYE, ayaa in shirka golaha dhexe ee xisbiga KULMYE ku tilmaamay mid cid gaar ah u afduuban iyaga oo sheegay in aanay kalsooni gabi ahaanba ku qabin qaabka uu shirku u socdo.
Labadan Guddoomiye ku xigeen ee xisbiga KULMIYE oo shalay shir jaraa’id Hargeysa ku qabtay waxa ay ka hadleen qaabka ay xal u arkaan iyo in ay ka dardaar warinayaan geeddi socodka hawsha qabanqaabada Shirweynaha KULMIYE oo ay ku sheegeen mid gabi ahaanba aan lagu kalsoonaan Karin. Xildhibaan Maxamed X. Yuusuf Axmed (Waabeeyo) oo arrimahaasi ka hadlayaa waxa uu yidhi: “Marka shir la qabanayo waxyaabo badan ayaa hawl maalmeed ah. Shaqooyinka waa la kala qaybqaybsadaa oo badhbaa Arrimo Farsmo ah (Technical) tusaale ahaan qaabta diyaarinta kaadhadhka. Midina waa tusaale ahaan sidii uu shirku u qabsoomi lahaa, goobtii uu ka dhici lahaa, ciddii wadi lahayd shirka, miisaaniyaddiisii, muraaqibiintii iyo guud ahaan cidii hawshaa gali lahayd. Labadaa hawlood ayaa ugu muhiimsan marka shir la qabanayo. Waxa xasaasi ah marka shir noocan oo kale ah la qabanayo arrimaha Farsamo. Waa qofkii Golaha dhexe ahaa la hubiyaa oo nambar iyo kaadh la siiyaa. Tartamayaashu waa in ay wada ogaadaan oo la socdaan arrinkaasi. Waxaad ogaydeen in aannu guddi noqonay oo waakii Madaxweynuhu na magacaabay oo la isugu kayo yeedhay Afartayada hogaanka ah (Guddoomiye ku xigeenka koowaad , Aniga (Waabeeyo), Cabdiraxmaan Talyanle iyo Xoghaye Xasan Siciid) oo na lagu yidhi hawshaa wada iyada oo nalagu xoojiyey Wasiir Cadami. Kulankayagii koowaad waxaanu kaga hadalnay si musharraxiinta loo shaki saaro qolada imika wadda hawsha farsamo laba xubnood halagu kordhiyo inteena hogaanka ahina hawlihii kale ee shirka aan qabano. Maxamed Kaahin maalintaasi wuu nagu raacay balse maalintii dambe ayay sheekadii badaleen oo ay yidhaahdeen labada xubnood ee imika shirka wada oo kali ahi ha wadaan innana hawlaha kale aan qabano. Waxaa halkaa nooga caddaatay in ay si gaar ah hawsha u wateen. Xataa waxay diideen in aanu dib u eegis ku samayno liisaska golaha dhexe ee la diiwaan gelinayay. Waxaanu aragnay in talooyin laga leeyahay oo laga wada socdo”. Xildhibaan Waabeeyo oo hadalkiisa sii wataa waxa uu yidhi: “Umadda waxaanu u sheegaynaa in markii ay tashi soo sameeyeen ay diideen in laba xubnood lagu kordhiyo qolada farsamada shirka wadda waana halka hawshu ka socoto ee rasmiga ah ee ay wax ka leexinayaan. Halkaa waxa ka cad in ay wax qarsanayaan. Haddii aannu nahay labadii xubnood ee Guddoomiye ku xigeenka 2aad iyo 3aad ee halkan fadhiya waxaanu garanay in aanu umadda reer Somaliland iyo gaar ahaan taageerayaashayadaba u sheegno oo aanaan qarin oo ay tahay arrin khalad ah oo afduub ah. Waxaan umadda u sheegaynaa in shirkaasi afduuban yahay. Amma Madaxweyne ha ugu yeedhaan ama cid kale ha ugu yeedhaane hawshaasi hawl bannaan yaal ah oo cad (Transparent) ma aha. Hawshaa halkaa laga wadaa ma aha mid cad oo caddaalad ah talo dambena waanu isaga iman doonaa. Haddii aannu nahay xubnaha hogaanka ka tirsan ee halkan fadhiya waxaanu rabnaa in ay Musharraxiintu helaan goob si siman looga tartami karo xisbiga haddii kale waa laga tashan doonaa. Ma aha guddoomiyuhu in uu marna noqdo tartame kubadda ciyaaraya marna garsoorihii kulanka maamulayay”. Ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey Xildhibaan Waabeeyo.
Dhinaca kale Guddoomiye ku xigeenka 3aad ee xisbiga KULMIYE Md. Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle oo isna kulankaasi ka hadlay ayaa yidhi: “Annagu markii aanu tagnay waxaanu la tagnay niyad wanaagsan oo ah in Musharraxiinta loo diyaariyo garoon caddaalad ah oo ay ku tartamaan. Waxaanu ku shaqaynaynay go’aankii Madaxweynuhu nagu soo magacaabay ee uu Madaarka kaga yidhi Xisbiga si caddaalad ah ayaa loogu tartamayaa. Qoladii meesha sii fadhiday ayay taasi ka suurtoobi la’dahay. Waxaanu kula garnaqsanay. Waar garab baannu ahayn idina garab baad ahaydeen. Waynu isku soo noqonay. Waxaad leedihiin Musharrax annana aqlabiyad iyo Musharaxiin baanu leenahay sideen haddana isku aamminaa ee xeego xeego u noqotaa. Waar haddii aan xisbigii u tudhayno oo aan midnimada ilaashanayno sideen u heli karnaa wax lagu wada calool san yahay. Idinka oo hawshii qarsoodi u qata haddii aanu idin nidhi laba xubnood oo idinla eega aanu idinku kordhino oo ay diideen side loo wada soconayaa. Way diideen. Taageerayaasha KULMIYE waxaanu u sheegaynaa in aannu guntii soo taabannay oo qoladaa xaruntii xisbiga fadhida ee leh waxbaa caddaalad u socda in aanay waxba ka jirin oo ay hawshaasi si badheedh ah ugu xaglinayaan dhinaca ay wataan oo ah Muuse Biixi”. Ayuu yidhi Xildhibaan Cabdiraxmaan Talyanle oo ah G/ ku xigeenka 3aad.
Previous PostHindiya Oo Haween U Adeegsanaysa Kaxaynta Diyaaradaha Dagaalka Noocyadooda Ugu Dambeeyey Next PostGudd.Muuse Biixi Oo Sheegay In Wasiirada Is Casilay Loo Eegi Doono Xeerka Ciqaabta KULMIYE